Muxuu isbeddel ku dhoolla caddeeyaa! | Martech Zone
Isniin, Maarso 12, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Waqti kasta oo aan wax ka beddelo mawduuca maqaalkeyga, waxaan ku dhaafay sawirkeyga bogga hore. Mar kasta oo aan ka tago, waxaan helayaa tan emayl iyo faallooyin ah oo aan weydiinayo halka ay tahay! Mar dambe qaladkaas ma sameyn doono - waa wax i xiiso galinaya inta jawaab celin iyo shakhsiyadeed ee ay ku keeneyso goobta. Anigu ma ihi narcissistic si kasta ha noqotee, waxaan la halgamayaa inaan sawiradayda ku dhajiyo goobta. Si kastaba ha noqotee, gabi ahaanba waan garwaaqsanahay sida ay u adagtahay in xiriir lala sameeyo qof aadan waligaa arag.
Haddii baloogyadu ay yihiin wada-hadallo, sidee baad wada-hadal ula yeelanaysaa qof aadan arki karin? Waa inaan qiraa, ka hor intaanan ku dhejin muraayadeyda dhoolla caddeynta cinwaanka, bogga runti wuxuu umuuqday mid guud ahaan guud ah Waxaan la yaabanahay saamaynta intee le’eg ayuu wejiga dhoola cadeynta ku leeyahay kobaca barta. Xaqiiqdii waxay leedahay xoogaa saameyn ah.
Soojiidashada kore ayaa la qaatay 4 sano ka hor aniga oo ka shaqeynayay dhibic ku taal Denver, Colorado. Waan ka culus ahay, waanan ka jilicsannahay, waana ka jilicsanaa sidii aan ku dhexjiray sawirkaas naxdinta leh. Sawir qaadahaas wuxuu lahaa karti badan! Waa tallaal aan in yar ku hayn doono goobta. Dabcan mooyee inaan qaabkaygii ku soo noqdo (oo aan ka ahayn pear). Waxaan dadka kula kaftamayaa haddii aan ku ordo ama baaskiil ku raaco si aan laptop-kayga u maamulo, waxaan noqon lahaa Mr. Caalamka. Xaqiiqdii saynisku wuu nala qabsan karaa si uu noo siiyo nolol caafimaad qabta oo ah kumbuyuutarrada, pizza iyo barnaamijyada xilli dambe, miyaanay ahayn?
Dhanka kale, waxaan sii wadi doonaa soo jiidashada. Markii aan kula kulmo, waxaad ku arki doontaa isla dhoollacaddaynta halkaas - in kasta oo wejigu aanu u qurux badnayn.
Waxaan kuugu hambalyeynayaa naqshadda cusub. Aad u fiican, oo nadiif ah.
Go'an Waxay ahayd gabi ahaanba laga cabsado lambarka dib-u-hagaajinta ee aan qoray oo aanan tijaabin.
Haa Hadda way shaqeysaa. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku darto “maya” boggaaga dib-u-toos ah 🙂
Haddii boggu kaco 5 ilbidhiqsi kadib, guji halkan.
Maxaan samayn lahaa idinka la’aantiin?! Mahadsanid!
xitaa magaca beddel “muggaaga” wuxuu ka dhigayaa inuu yahay meel raaxo leh oo la yimaado.
Mahadsanid, Steven! Taasi waa hubaal waxa aan u socdo. Dhammaantood waa la soo dhaweynayaa… marka laga reebo kuwa celceliska ah!
Doug! Horumar weyn!
Waxaan dhihi lahaa 'Suudhka suudka ku laabo oo ku noqo muuqaalkii xiisaha lahaa ee aad horey u laheyd', ka dib waxaan u fikiray ilbiriqsi
Ok, runti ma waxaan u baahanahay nin kale oo suudh ka hadlaya oo ka hadlaya tikniyoolajiyadda iyo suuqgeynta? INKASOO AH, run ahaantii ma waxaan dooneynaa inaan ka aqrino tikniyoolajiyadda iyo suuqgeynta jilbaha ku yaal jiifka
Marka, maxaan sameynaa? Waxaan u baahanahay isku darka sawirka ugu horeeya adiga oo qoslaya, iyo kan labaad - laakiin bilaa xariga. Dhamaan 'Saaxiibtinimo / Qosol badan, oo aan cufan lahayn, haddana weli xirfad leh' ayaa u muuqda oo dareemaya.
Laakiin haye, waa wicitaankaaga, walina waad iga geesinimo badan tahay x1000 aniga oo adeegsanaya madax xanuun madaxaaga ah. (Waxaan ku dhagayaa madaxayga ambigram ee aaminka ah ilaa aan dib u cusboonaysiin doono… markale…) 😉
Hagaag, maskaxda ku hay tani waxay ka imaaneysaa nin heysta kartoon isaga u gaar ah oo madaxiisa ah, laakiin sida William oo kale, waxaan ka helay "Doug qoslaya" Laakiin si ka duwan William, waxaan rabaa tiknoolajiyadeyda iyo suuqgeynteyda jilib jilicsan a
Waa sawir fiican inkasta oo, iyo muuqaalka guud ee laga cabsado - jajab, nadiif ah, laakiin geesinimo leh.
Waan ku qoslayaa sawirkaan! Qosol maxaa yeelay waxaan xiiseynayaa inta taabashada ay qaadaneyso inay iga dhigeyso mid la soo bandhigi karo.
Codka Tony: Qosol Doug.
Codkeyga: Qosol Doug.
Hada codee 😉
Tony: Waan ogahay bartaada si aad u fiican hada - taada waxaa loo samaynayaa SOAP sida aan ugu hadlayno Robert Hruzek (middleszonemusings.com)! Ku saabsan hawl fudud sida sameynta kani ahayd! (waa inay ahaataa bil wanaagsan waaxda daaweynta)
Wax la mid ah ayaan ka helay sawirka bisadeyda. 🙂
Goorma ayey gaareysaa heerka cibaadada?
engtech, taasi waa wax cajiib ah!
Ma haysto bisad. Waxaan hayaa Jack Russell oo la yiraahdo Cooper oo ugaarsada oo dilaya dhammaan bisadahaas. 🙁
Hadalkan oo dhan ee wajiyada dhoola cadeynaya iyo bisaduhu waa ay ila soo gaareen sidaa darteed waxaan go aansaday inaan ku daro widget sidega ah WinExtra mascot qiyaastii nus ka hooseysa LOL .. nacalad nimanyahow waxan oo dhan diiran oo waalan.